Taliye Odowaa oo tababar u soo xirey ciidamo Kumandoos ah - Home somali news leader
Home NEWS Taliye Odowaa oo tababar u soo xirey ciidamo Kumandoos ah
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed S/guuto Odawaa Yuusuf Raage ayaa tababar heerkiisu sarreeyo u soo xiray cutubto ka tirsan ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska Danab.
Munaasabad lagu soo xirayay tababarkan ayaa ka dhacday saldhigga ciidamada ee Balli-Doogle, iyadoo tababarkana au gacan ka geysatay dawladda mareykanka ayaa socday muddo dheer, waxaana bixinayey macalimiin katirsan kumaandooska Danab, iyaddoo Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odawaa uu salaan sharaf ka qaatay ciidankaan sida gaarka ah loo tababaray.
Ciidankaan ayaa soo bandhigey dhoola-tus heerkiisu sareeyo, kaasi oo ay kamid ahaayeen habka cadawga loo beegsado, difaacu nafsiga, waxaana sidoo kale ay soo bandhigeen dabrid iyo hababka kale ee dagaalka.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka S/Guuto Odawaa Yuusuf Raage oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ciidankaan kumaandooska ay ka qeyb qaadan doonaan howlgalada Ummadda Soomaaliyeed looga dulqaadayo cadawga argagixisada Alshabaab.
ciidamo kumaandoos ah oo tababar loo soo xirey
Previous articleOfficials warn of gloomy winter when US Covid-19 hospital admissions reach 100,000 records
Next articleCabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka digey in Jubbaland loo aqoonsado deegaan cadow haysto